प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)
Sunday, 14 Apr, 2019 9:23 AM
काठमाडौँ, १वैशाख- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । नव वर्ष २०७६ सालका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामनासहित राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु भएको हो ।
– गए रातीबाट हामीले बिक्रम सम्बत् २०७५ लाई विदा गर्यौं । आशा, उत्साह र अपेक्षाका साथ गएको वर्ष शुभारम्भ भएको थियो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले सिङ्गो वर्षभरी आ–आप्mनो स्थानबाट सक्दो मेहेनत ग¥यौं । आजको यो नयाँ विहानीमा म, सबै नेपाली दिदीबहिनी÷दाजुभाइहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
- यी स–साना नानीहरुका लागि गतिला विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्न भरपर्दा बाटा र पुल कसरी बनाउने?
- सुत्केरी व्यथालागेका यस्तै भूभागका आमाहरुलाई बचाउने पर्याप्त मानवीय र भौतिक संसाधनको जोहो कसरी गर्ने?
- कर्णाली नदी र त्यससँगै गडगडाउँदै बगिरहेकाअरु नदीहरुबाट बत्ति निकालीगाउँ÷बस्तीको अँध्यारो कसरी भगाउने?
- सिंचाईको अभावमा बाँझै रहेका यहाँका खेतबारीलाई हरियाली कसरी बनाउने?
- लगानीको लागि भरपर्दो वातावरण हेरी हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुले नेपाललाई दक्षिण एशियाको उदाउँदो अर्थतन्त्र(राइजिङ्ग स्टार) भनेका छन् ।
- विश्वका विभिन्न मुलुकले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा आधारित हाम्रो सहभागितामूलक शासन पद्दतिलाई प्रेरणादायी र अनुकरणीय मानेका छन् -
- यो वर्ष विधि निर्माणको वर्ष हो भनिएको थियो, कति कानुन बने ? कति संशोधन भए ?
- कति किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भयो?कतिवटा पक्की पुल निर्माण गरियो?
- तुइन विस्थापन गरी पुल बनाउँदा के फाइदा भयो?
- पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर त तयार भएछ, लिग बिछ्याउने काम चाँहि कहिलेबाट शुरु हुन्छ?
- पानीजहाज कार्यालय खुलेछ, सतह–जल यातायात कहिले र कहाँबाट चल्छ?
- पहिले नचलेका कतिवटा विमानस्थलअहिले सञ्चलनमा आए?नेपाल भ्रमण वर्ष मनाईंदैछ, नेपालसँग अहिले आफ्नै हवाइजहाज कतिवटा छन् ?
- नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा थालिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो? आजैबाट शुरु हुने जेष्ठ–नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले हाम्रा आमा–बाबाहरुलाई के लाभ दिन्छ?
- ‘खोलौं बैंक खाता’ कार्यक्रम के हो ? यसले कसरी फाइदा पु¥याउँछ?
- काम र रोजगारीको अभियान कहाँ पुग्यो?प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनतालाई कसरी लाभ दिने भयो?
- ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’बाट देशलाई र स्वयं शेयर किन्ने व्यक्तिलाई के कति लाभ हुन्छ?्
- छिमेकी मित्रराष्ट्रका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भएको हाम्रो सहभागिताले मुलुकले के के लाभ पाएको छ ?